CAJIIB: Waxa Uu Ka Dalbaday Cristiano Ronaldo Macalinka Portugal Kaddib Markii Xanuunka Laga Helay Oo Kaa Yaabinaya - Gool24.Net
CAJIIB: Waxa Uu Ka Dalbaday Cristiano Ronaldo Macalinka Portugal Kaddib Markii Xanuunka Laga Helay Oo Kaa Yaabinaya
Tababaraha xulka qaranka Portugal ayaa shaaca ka qaaday rabitaanka layaabka leh ee Cristiano Ronaldo kaddib markii kabtankiisa laga helay xanuunka dunida saamaynta balaadhan ku yeeshay ee Korona Fayras.
Xulka Portugal ayaa shalay warbixin rasmi ah ku shaaciyay in Ronaldo laga helay caabuqa dunida saameeyay sanadkan 2020 taas oo ugu horreynba balan-qaadaysa inuu maqnaan doono kulanka ay caawa dhigooda Sweden la yeelanayaan.
Ronaldo ayaa lagu sawiray isaga oo banaanka meesha uu karantiinka ku galay kasoo daawanaya xiddigaha xulkiisa Portugal oo tababar samaynata kaddib markii xanuunka laga helay.
Sheekada haatan layaabka leh ee uu shaaca ka qaaday macalin Fernando Santos ayaa ah in Ronaldo uu aad u doonayo inuu ciyaaro kulanka caawa ee Sweden xataa isaga oo xanuunka qaba walow uusan sharcigu midaas u ogolaanayn.
Arrintan ayaa caddayn kale u ah nooca xirfadle ee uu yahay Cristiano oo ciyaaryahan kasta oo la ciyaaraa uu ka marag-kaco inuu yahay midka ugu shaqada iyo hawl-karnimada badan ee uu soo arkay.
Santos oo arrintaas iyo xaalada Ronaldo ka hadlaya ayaa yidhi “Ma jirto koox sidii hore ka fiicnaan karta la’aanta ciyaaryahanka ugu wanaagsan dunida laakiin kooxdani xilli horeba waxa ay ku muujisay wadajirka inay leeyihiin qaadka ay kaga kabanayaan xaaladaas”
“Isagu si aad u wanaagsan ayuu xaalada u maamulayaa, isagu waxa uu ku jiraa qolka isaga oo sheegaya inuu doonayo inuu ciyaaro, waxa uu nagala soo hadlaa kaabadaha sarre”